Dr. Cabdirisaaq Bogcad | allsanaag
Dr. Cabdirisaaq Bogcad
Mashruucii ugu wanaagsanaa ee Puntland laga hirgeliyey waa Biyo xareenka ku yaal bariga Fog ee gobolka Bari. Aqoonyahankii lahaa maskaxda lagu dhisay Biyo xireenkan, Xilkii uu Puntland ka hayey waa iska casilay . Ka dib markii loo bedelay wasaarad kale uu sheegay inuuna aqoonteeda soo baran,Waa dhaqan ku cusub Soomaalida in aad aqoontaada Bulshada wax ugu qabato, waxaadan aqoona aad ka cudur daarato. Bogcad aqoontiisii maanta kumaakun dad ah iyo malaayiin xoolo ah ayaa ku badbaaday. Halaka madaxweynaha Puntland oo isagu soo bartay Dhaqaalaha uu dalka keenay makinadaha lacagta beenta ah sameeya. Taas oo dhalisay sicir barar iyo in saboolnimaddii oo sii siyaado, Sidoo kale dhalisay faraq weyn u dhaxeeya Tijaartii iyo dan yartii
← OIC sets meeting in wake of Myanmar beating video of Rohingya Muslims Maangaabka Mooryaanimadu u dheer tahay →